Njengoba aluthola yesimanje walithela eseyintsha - iphone, abanikazi idivayisi electronic elahleka, bengazi ukuthi likwazi ukwenza izinguquko ezidingekayo. Ngokuvamile ezimweni ezinjalo, babe Sokuzivikela kuya ezikhethekile nezikhungo zomsebenzi. Kodwa kungenzeka ukuba uzazi kahle futhi, ngokwesibonelo, nge umbuzo ukuthi ungasetha kanjani mms phezu iPhone.
Amaphutha izilungiselelo iphone
Ngokuvamile ngakwesokudla ngemva ifoni SIM khadi icushiwe, izilungiselelo MMS ukuza kuye. Kodwa ngokuvamile abanikazi iPhone nenkinga enjalo, lapho imiyalezo ye-MMS ithunyelwa noma etholwe idivayisi yakho. Kunconywe ezimweni ezinjalo ukususa bese kabusha ukubuyisela ukufinyelela Inthanethi amaphuzu, ukugcina ukulandelana elandelayo: "ukufinyelela i-MMS iphuzu," "Ukufinyelela i-Inthanethi amaphuzu". izilungiselelo zabo kumele kuthathwe kusuka kumasayithi okungewakho opharetha mobile. Enough ukuze senze ukulungisa e ikheli leseva yemibiko mms - futhi inkinga ziyoxazululwa.
Indlela usethe mms - amathiphu
izilungiselelo ezizenzakalelayo zinikwe ayisebenzi njalo. Ngakho-ke, ukuze uqale ukuthuthukiswa amadivayisi amasha electronic: i-tablet, aypada, iPhone -prihoditsya ukwenza konke ngesandla. Kodwa ungesabi zedivayisi ezingaziwa, njengoba usethe mms ngeke kube nzima ngisho indoda, kude ubuchwepheshe. Ngaphambi usethe i-MMS, kufanele uhlole ukuthi firmware iphone kwakungelona ngaphansana 3.0.
Cabanga yonke inqubo kusukela ekuqaleni. Okokuqala, udinga esikrinini ukuvula "Izilungiselelo". Khona-ke, ukuthola imenyu kwento "General", ke - "Inethiwekhi". Uma opharetha yakho yeselula asekelana izici electronic kudivayisi avumele, nika amandla 3G. Kodwa kufanele kukhunjulwe ukuthi ibhethri kungenziwa ngokushesha esibhedlela. Ukuze usebenzise i-Internet, kufanele unike "Idatha yeselula". khetha "Idatha yeselula Network" kwimenyu. Ukuze ulungise i-MMS, kufanele ufonele u-opharetha yakho yeselula bese ucela amasethingi e-othomathikhi. Noma yini ongayenza wena ngokwakho. Kungasiza futhi wesevisi ye-inthanethi "Navigator".
Feza izenzo ezilungile, okuye letinikwe lapha ngenhla, ifoni yakho kufanele kabusha. Amasethingi kungahluka ngokuvumelana esifundeni yokuhlala yomnikazi idivayisi electronic. Lokhu kusebenza MTS. Njengoba lowo othola inkampani yeselula ukuthola izilungiselelo udinga ukufaka isicelo opharetha isayithi bese ukhetha imenyu ngokuthi "Usizo nokusekela". Ohlwini esivula, kumelwe ukhethe "Izilungiselelo MMS". Ngo ifomu elingezansi ukwenza inombolo yakho yocingo, okuyinto ecacisiwe ngefomethi idijithi nesikhombisa.
Ngakho ukuthi ungasetha kanjani mms ngaphandle kusebenze izici GPRS / EDGE awukwazi ke opharetha kumele uthumele USSD-umyalo * 111 * 18 #. Kunenye izilungiselelo Inketho-MMS. Ukuze wenze lokhu, umbhalo ithunyelwa MMS wombhalo enombolweni 1234. Lapho uxhumano senziwa, qiniseka ukuthumela noma yimuphi umlayezo, ukuze ube nethuba ukuthatha mms. Kukhona eyodwa ngaphezulu inombolo ewusizo, okuyinto ongazisebenzisa ukuze kusebenze MMS isevisi - 0876.
Uma udinga ukufunda indlela yokumisa MMS ababhalisile of "megaphone" kwanele vakashela iwebhusayithi ye-opharetha mobile olusemthethweni futhi ugcwalise ifomu lapho. Ngemva kwalokho izothunyelwa kuzilungiselelo kufoni yakho ukuze wenze isevisi ye-MMS. Kuyadingeka ukuzilondoloza, indlela kusiza mms uthole ngisho nezilungiselelo ku-intanethi. Ungase uthole idatha ezidingekayo ngokusebenzisa umyalezo we-SMS equkethe inombolo 3, okuyinto kumele ithunyelwe inombolo 5049. Uma uxhumane isikhungo ukusekela ababhalisile mobile "megaphone" ngaphansi inombolo 0500 kufanele ngokuthi imodeli kanye brand ye umakhalekhukhwini, bese wakhipha umyalelo amasethingi e-othomathikhi i-MMS.
Ukuze ababhalisile izilungiselelo opharetha mobile "Beeline" ngokwezifiso ngokusebenzisa USSD-isicelo * 118 * 2 #. imodeli yefoni kunqunywe ngokuzenzakalela opharetha. Amasethingi emva kokuthola ngempela udinga ukulondoloza ngephasiwedi ka 1234. Ngale kwalokho, ngeke zisebenze.
Manje, ukuhlola kungenzeka ukuthola amasethingi e-othomathikhi-MMS, kuncike ku-opharetha mobile noma ufunde isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo wekuphatsa kubo ngesandla, wena uzokwazi ukubhekana kangcono nale nkinga.
Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe Ukususa i-akhawunti ku-iPhone? Sibheka izindlela eziyinhloko
Hero we-USSR Melnikov Andrei Alexandrovich